I-Bearf OnPods, izandla zasimahla kunye neendlebe mahala | Iindaba zeGajethi
I-Bearf OnPods, izandla zasimahla kunye nendlebe mahala
URafa Rodríguez Ballesteros | | Izixhobo, Umfanekiso kunye nesandi
Namhlanje kwiActualidad Gadget sithetha ngayo imveliso engekathengiswa. Akukho nto intsha ukuba sihoya inani lokuvuza kunye neendaba malunga nophuhliso lwexesha elizayo kwimarike esiyifumana mihla le. Kodwa oku kwahlukile. Siza kukuxelela yonke into malunga nayo iiBearf OnPods, iprojekthi ekwisigaba sophuhliso esele likwazile ukufumana ingqalelo yethu.
Ku malunga umbono weeNtloko ezingenazingcingo zeNtambo ezingenazingcingo esingakhange sizibone ukuza kuthi ga ngoku. Ukuyilwa kwesitampu saseSpain ngomkhankaso oqhubekayo wenkxaso mali ethembisa ukunika okuninzi ukuba ungathetha ngalo kweli candelo lentengiso lisebenzayo. Isilogeni sakhe sicacisa kakhulu, Izandla zasimahla kunye neendlebe mahala, ngaba kunokwenzeka? kunokwenzeka. Sibonile ukuba kusekho indawo yokuyila izinto ezintsha kwanombono apho kubonakala ngathi akunakwenzeka.
1 I-Bearf OnPods, mhlawumbi uyilo lotshintsho
2 Ukuva umculo kunye nezandi ezikungqongileyo kunokwenzeka ngeBearf OnPods
3 Iprojekthi onokuyijoyina ukuba unomdla
I-Bearf OnPods, mhlawumbi uyilo lotshintsho
Njengoko silindele wena, kuphela ngesiqubulo sakhe sokuthandabuza okunzulu esele kwenziwe. Kwenzeka njani ukuba uthembele ii-headphone ezingenazindlebe? Ewe oku kunokwenzeka enkosi kwinkqubo yokuva esekwe kuhambo lwentlala. Ngokunyaniseka, emva kokufunda ngale projekthi kufuneka siyiqonde ukuba yinto esingazange seva ngayo ngaphambili. Kukho kwimarike ii-headphone ezisekwe kwithambo isandi. Inkqubo apho ukungcangcazela kudluliselwa emathanjeni, kwaye kugqitha indlebe ephakathi, kufikelela kwindlebe engaphakathi. Ingcamango ebonakala ngathi ayiphumelelanga kakhulu.
Itekhnoloji yokusetyenziswa kwezi Bearf OnPods ebizwa ngokuba yi-cartilaginous conduction ibangela ukungcangcazela kwesandi ukuba kuhamba nge-cartilage ukuya kwi-eardrum. Ukusuka kwindlebe ziyahlangana ngendlebe kwaye zilandele indlela efanayo. I-priori, enye yeenzuzo esizifumana ngaphezulu kweentloko zeeselfowuni kukuba iBear OnPods cacisa ngokupheleleyo umjelo wendlebe. Ke sinako, ngelixa sonwabela umculo wethu, uve izandi zangaphandle Ngokucacileyo ngokupheleleyo.
Imibuzo iyaqhubeka ... ukuba iindlebe zisimahla Sizibeka phi i-Bearf OnPods? Apha sifumana enye yezinto ezintsha. Ngokwenyani besingalindelanga ukuba ii-headphone ziphume ezindlebeni. Isixhobo apho ibhetri, isithethi kunye ne-chip yokudibanisa zikhona imi emva kwendlebe, kanye kwi-cartilage. Y ngaphakathi kuya kufuneka sifumane umazibuthe omncinci kuphela ukongeza ekubambeni isixhobo uzalisekisa umsebenzi wokuhambisa ukungcangcazela isandi.
Ukuva umculo kunye nezandi ezikungqongileyo kunokwenzeka ngeBearf OnPods
Enye ye iinkonzo ezifunwa kakhulu kumzi mveliso wee-headphone ezingenazingcingo ukunciphisa ingxolo. Inkqubo ethi ngokukhupha ubuncinci be-hum, kwizinto ezininzi ezingabonakaliyo, ikhuphe izandi zangaphandle. Ngenxa yoko, abasebenzisi bee-headphone zokunciphisa ingxolo banokuntywila kumculo wakho. Kodwa kukho abo bangafuni ukumamela nje umculo kwaye bazihlukanise ngokupheleleyo yonke into ebangqongileyo.
I-Bearf OnPods ibonelela nge ukubanakho ukonwabela umculo owuthandayo akukho zixhobo okanye iqhina. Kodwa kwangaxeshanye ukwazi ukuba nencoko, mamela isandi solwandle, okanye uqaphele ukuba kukho umntu osibizayo esitalatweni. Ukongeza, Uyilo lwezi headphone lwenza kungabonakali ukuba uzinxibile. Ukujonga ngqo kumntu ozinxibileyo, uyabona ukuba abananto ngaphakathi kwendlebe, kwaye umazibuthe omncinci uphantse wafihlwa, unamathele kwintlala.
Phakathi kwezibonelelo ezinikezelwa yifomathi ye-Bearf OnPods esiyifumanayo, njengoko besitshilo, oko zilumke ngakumbi. Bayahamba nabo ngokupheleleyo simahla indlebe indlebe ukuze sikwazi ukuva yonke into eyenzekayo kwimeko-bume yethu. Ayibangeli monakalo kwindlebe okanye usulelo ngokuba nento endlebeni. Ukongeza, Ukuhanjiswa kweentshukumo ngokuthe ngqo ukusuka kwi-cartilage ukuya kwi-eardrum kwenza ukuba ii-bass zive zicace gca Ngaphandle kwee-headphone eziqhelekileyo.
Iprojekthi onokuyijoyina ukuba unomdla
Njengoko besesiphawulile ekuqaleni, sijongene iprojekthi kwisigaba sophuhliso. Ngokwabavelisi, emva kweendlela ezininzi, imveliso isondele kakhulu ekubeni ibe noyilo lokugqibela oluza kwenziwa ngentengiso. Ukwenza oku, a iphulo lokufumana imali apho uza kuthi uyithathe njengeprojekthi enomdla kwaye ngekamva onokuthi ujoyine negalelo. Asazi ukuba oku, kusekho prototype, kuya kuba yimodeli enokuthengwa kuyo nayiphi na ivenkile. Kodwa ngokwayo umbono ungowokuqala.
Kukho Uncedo olunokuthi iBearf OnPods inayo nayiphi na enye iseti yentloko ukusuka kwintengiso, ubuncinci okwangoku. Kwaye kunjaloNgokwemigaqo yangoku yezithuthi zaseSpain, akuvumelekanga ukuqhuba nokuzisebenzisa. Umgaqo uyakwalela ukusetyenziswa kwaso nasiphi na isixhobo esifaka ngokupheleleyo okanye esigubungela indlebe. Ke, isixhobo esimanyelwayo esingaphandle kwendlebe ngokupheleleyo ukushiya ijelo lokungena simahla akukho phakathi kwezo singenako ukuzisebenzisa xa uqhuba.
Bearf OnPods iihedfoni ezinikelwayo TWS uqhagamshelo Bluetooth kwaye iyahambelana nasiphi na isixhobo. Nangona kwiifoto, ezibekwe ngasemva kwendlebe zinokubonakala ngathi zinkulu, ubunzima bayo ziigram ezi-5 kuphela. Kwaye banamandla afikelele kwinguqulelo yamva yomzekelo ukuya kuthi ga kwi-63 dB. Umsebenzi owaneleyo ukuze ubonelele ngamava okuphulaphula ngaphandle kwezandla. Okuninzi kuya kuxhomekeka kwimpumelelo yayo kwixabiso lokugqibela elifikelela kwimveliso xa iqhubeka nokuthengisa, ukuze ikwazi ukukhuphisana nezinye iindlela ezininzi.
Ukusuka kwiActualidad Gadget besifuna ukuxhasa inyathelo «lenziwa eSpain»Yeyiphi, ukongeza ekubeni unomdla, ineendlela zokuba yinyani kungekudala. Uphando, indaleko kunye nezinto ezintsha kwicandelo lobuchwepheshe zihlala zamkelekile. Kusenokwenzeka ukuba kungekudala kungekudala siya kuba ne-headphone yeeteknoloji yokuhambisa iselfowuni kwimarike.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo » I-Bearf OnPods, izandla zasimahla kunye nendlebe mahala
Imigaqo yezendlela njengoko uyibiza njalo, ngumgaqo ogcweleyo wendlela we-1428/2003 kwaye kwinqaku layo le-18 liyenza icace gca, "akuvumelekanga ukuqhuba nokusebenzisa ii-HELMETS OKANYE II-HEADPHONES eziqhagamshelene nabamkeli okanye abavelisi bezandi." Iphethe isohlwayo sama-euro angama-200 kunye nokurhoxiswa kwamanqaku ama-3 kwilayisensi yokuqhuba. Mbonise kwaye ujonge imigaqo kwakhona.
URuben Lopez sitsho
Molo, ndinguRubén López, umqambi wemveliso, enkosi kakhulu ngezimvo zakho. Ewe ulungile njengoko behlengahlengise imimiselo ukuze ungabinakho ukuqhuba usebenzisa enye yezi zixhobo. Nangona kunjalo, kukho ezinye izinto ezinje nge-LG Tone Ultra, ethi ingaphazamisi umjelo wendlebe ogunyazisiweyo yi-DGT (basisithethi entanyeni). Njengoko ubona kwiwebhusayithi yam kunye nekhonkco lokubuyiselwa kwemali, andibonisi ukuba zikulungele ukuqhuba eSpain, mhlawumbi ukuba kwamanye amazwe kuba azithinteli nantoni na. Nangona kunjalo ndiyakholelwa kwaye nabani na oyisebenzisayo ukuba angahlangabezana neemfuno zokuqhuba kwaye ndizama ukwenza oku. Umbuliso.
Phendula uRubén López
Kwi-Instagram baxakeke kakhulu ukuba bangapapasha i-iPad